दिल्ली विधानसभा मतपरिणाम सन्देश : आश्वासन/नारा हैन, काम गर – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ माघ २९, बुधबार) ०५:५७
भारतमा सम्पन्न दिल्ली विधानसभा निर्वाचनको परिणाम हेर्दा मतदा दिल्ली विधानसभा ताले मिठो आश्वासनभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीले जनताको पक्षमा गरेको कामको मुल्यांकन गर्छन भन्ने प्रमाणित गरेको छ।
भारतको नीति निर्माण गर्ने केन्द्रिय संसद लोकसभामा भारतीय जनता पार्टीको दुई-तिहाइ बहुमत छ। कुल पाच सय ४५ सदस्यीय लोकसभामा भाजपाका तीनसय ३ सांसद छन् । दुई रुपैयाँ किलो आँटा उपलब्ध गराउने भाजपाको नारालाई मतदाताले विश्वास गरेनन् ।
आपले २०० युनिट बिजुली निःशुल्क गरेको देखेपछि कंग्रेसले ३०० युनिट बिजुलीको शुल्क नलिने घोषणा गर्‍यो । आपको नक्कल गरिएको यो नाराले मतदाता आकर्षित भएनन् ।
लगातार दुई वटा विधानसभामा खाता खोल्न नसकेको काँग्रेसको यस्तो नाराको बाबजुद मतदाताले कांग्रेसलाई मत दिएनान। फलस्वरूप अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा झण्डै आधा भन्दा बढी मत घटेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा १० प्रतिशत भोट पाएको कंग्रेसको भागमा यसपटक ४ प्रतिशत भोट आएको छ ।
अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको जगमा २०१२ मा स्थापना भएको आपले दिल्लीमा भाजपाको राप र तापलाई मत्थर बनाइदिएको छ।
विधानसभा निर्वाचनअघि मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले मतदातालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘कामका लागि भोट दिनुस्, यदि हामीले काम गरेका छैनौं भने भोट नदिनुहोस् ।
‘मेरो भोट कामलाई, सिधै केजरीवाललाई’ आपले विधानसभा चुनावमा यस्तै नारा लगायो । स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, पानी, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा गरेको कामको आधारमा आपले यस्तो नारा लगाउने हिम्मत गरेको थियो । जनताले यो नारालाई उसको बिगतको काम हेरेर पत्याए।
आपको सरकार बनेपछि २०१९ अगस्तदेखि दिल्लीमा २०० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई बिजुली निशुल्क छ । यस व्यवस्थाले मतदाताको ठूलो हिस्सालाई प्रभावित गरेको देखिएको छ ।
आपको सरकार बनेपछि सार्वजनिक यातायात पनि सुधार देखियो । कतिपय सार्वजनिक यात्रा निःशुल्क गरे ।
२० हजार लिटरसम्म पानी प्रयोगकर्ताले पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन । पछिल्लो छ महिनामा केजरीवाल नेतृत्वको सरकारले ४०० भन्दा बढी स्वास्थ्यचौकी स्थापना गर्‍यो ।
सामुदायिक विद्यालयको २० हजार नयाँ भवन बनाएको आपको दाबी छ । आपले यो योजना अन्य राज्यमा पनि लागु गर्ने आश्वासन दिएको थियो ।
झण्डै पौने दुई करोड जनसंख्या रहेको दिल्लीवासीलाई निःशुल्क सेवा दिने रकम कहाँबाट आयो ? धनीसँग उठाएको करले करिब पोस्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा केजरीवालको जवाफ छ– मेरो सरकार बनेपछि एक रुपैयाँ कर बढेको छैन, यो सबै पैसा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदा संकलन भएको हो ।
भारतको दिल्लीमा भएको ७० सदस्यीय विधानसभा निर्वाचनमा अरबिन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टी (आप)ले स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ । आपले दिल्लीमा तेस्रो पटक सरकार बनाउँदैछ ।
भाजपाले जम्मा ६ सिट जितेको छ भने आपले मंगलबार दिउसोसम्म ५२ स्थानमा जित हासिल गरेको छ ।
आधाआधी मतगणना सकिएपछि केजरीवाल ट्विट गरे– आज दिल्लीवालाले नयाँ राजनीतिलाई जन्म दिएका छन्– कामको राजनीति ।
‘आफ्ना छोरोलाई यति धेरै माया दिनुभएकोमा दिल्लीवासीलाई ह्रदयदेखि नै धन्यवाद । आज दिल्लीवालाले नयाँ राजनीतिलाई दन्म दिएका छन्–कामको राजनीति’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केजरीवाल सरकारले दिल्लीवासीको आकांक्षा पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । आपलाई बधाइ दिँदै उनले लेखेका छन्, ‘दिल्ली विधानसभा चुनावमा जितका लागि आप र अरविन्द केजरीवाललाई बधाई । दिल्लीवासीको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि शुभकामना छ ।’
(२०७६ माघ २९, बुधबार) ०५:५७ मा प्रकाशित